ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၇) – တိမ်တိုက်ထွန်း ရေးတဲ့စာ
ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၇)
အွန်လိုင်းနဲ့ ဝေးတဲ့တစ်နေရာကို ရောက်သွားတဲ့အတွက် ကိုယ်မင်းဆီကို စာမပြန် ဖြစ်တာပါ။ ရုတ်တရက်ကြီး သွားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြိုမပြောဖြစ်တာ တောင်းပန် ပါတယ်။
အရမ်းသတိရတယ် Hoa ။ ရင်နှင့်အမျှပါပဲ။ ကိုယ်ဟိုချီမင်း စီးတီးကိုလာဖို့ အချိန်အ များကြီးလိုသေးတယ်နော်။ တွေ့ချင်လှပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေတယ်။ တွေ့ခွင့်ရမယ့် နေ့ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုအခြေအ နေပဲရောက်ရောက် မရမကပိုက်ဆံရှာပြီး မင်းဆီကို အရောက်လာမယ် Hoa။ အရမ်း ချစ်တယ်။
ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကို မပြောသင့်ဆုံးလို့ မေးလ်ပို့ပြီးမှ စဉ်းစားမိပေမယ့် လက်လွန်သွားပြီမို့ မတတ်နိုင်တော့။ ကျွန်တော့်ငွေကြေးအခက်အခဲကို Hoa သိရင် စိတ် ပူနေမှာပေါ့။
Hoa ဆီကစာတွေအများကြီးပို့ထားပါသည်။ g mail ထဲမှာရော။ Facebook ထဲ မှာရော။ Hoa က gmail ထက် Hot mail ကိုအဓိကထားသုံးတတ်ကြပေမယ့် ကျွန်တော့်ကြောင့် Hoa gmail သုံးတတ်ခဲ့ပြီ။ အဲဒီ ဂျီမေးလ်ကလည်း ကျွန်တော့်အတွက် သီးသန့်သုံးခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော်သိချင်သော ဗီယက်နာမ်ရိုးရာ မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ပို့ပေးထားလေသည်။
Hoa ဓာတ်ပုံတွေ၊ Hoa ထံကစာတွေကို မြင်ရရင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အေးခနဲဖြစ် ပြီး အလိုလိုစိတ်ချမ်းသာ မိလေသည်။
တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အခက်အခဲတွေ တဒင်္ဂအတွင်း ကွယ်ပျောက်သွားသလို ခံစား ရသည်။ ကျွန်တော့်ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းတွေကို ဖတ်ရတော့ ချစ်သူလေးကို ပိုတွေ့ချင်သွားမိသည်။
မေမြသွယ်ကြောင့် ကျွန်တော့်ရှိစုမဲ့စု ပိုက်ဆံအတော်များများကုန်သွားရသည်။ အဲဒီ အမျိုးသမီးနဲ့ ဒီဘဝတင်မက နောက်ထပ် ဘဝပေါင်းများစွာ ပတ်သက်လိုစိတ် တကယ်ပင် မရှိချင်တော့ပါ။
သို့ပေမယ့် ရေစက်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့်လားတော့မသိ။ တနည်းမဟုတ် တနည််းနဲ့ မေမြသွယ်နဲ့ ပတ်သက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာသည့် ကျွန်တော့် ကံကြမ္မာကိုတော့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းစွာပင်အပြစ်တင်မိပါသည်။
တစ်ရက်မှာတော့ မေမြသွယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လာတောင်းပန် ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးရောက်လာပါသည်။ ကျွန်တော် အားမနာနိုင်တော့ပါ။ သူတို့နဲ့ မပတ် သက်ချင်တော့တဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြမိသည်။
”ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး လာမပတ်သက်ကြပါနဲ့တော့။ မေမြသွယ်ဆိုတဲ့ နာမည် ကို မကြားချင်သလို သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လူတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်မတွေ့ချင်ဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့အတွေ့ အကြုံမျိုးတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့် တစ်သက်လုံးမခံစားဖူးရခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေခံစားရတယ်။ ကျွန်တော် ဒီသတင်းထောက် အလုပ်ကို အရမ်းပျော်ခဲ့တာ။ ခင်ဗျားသူငယ်ချင်း ပြဿနာကြောင့် သတင်းထောက် လောကကို ညည်းငွေ့ချင် သလိုလိုတောင် ဖြစ်မိခဲ့တယ်”
ကိုယ့်ဖက်ကမှန်နေသည့်တိုင်အောင် အခုလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရင်တော့ ဘယ်သူ က စိတ်မညစ်ဘဲနေနိုင်မှာလဲ။
အနည်းနဲ့အများ စိတ်ခု၊ စိတ်လေမိကြမှာပါပဲ။ သတင်းမှားတယ်လို့ သူတို့ကပြော လိုက်၊ ကိုယ်ကဖြေရှင်းရလိုက် ပြဿနာတွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးရှိသလို ကိုယ့် သတင်းကြောင့် အများပြည်သူ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါသည််။ အဲဒါမျိုးကျတော့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရသည်။ အဲဒီလို သံသရာလည်နေတဲ့ သတင်းလောက ကြီး။
”ဘာတွေများပြောဦးမလို့လဲဗျာ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး မပြောပါနဲ့တော့။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ လာမတွေ့ပါနဲ့တော့။ နောက်ဆုံးဗျာ လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင် မခေါ်စေ ချင်ဘူး”
”ကျွန်မ တောင်းပန််ဖို့လာတာပါ ကိုသော်မင်းနောင်။ မေမြသွယ်ရဲ့ ထင်ရာလုပ်တတ် တဲ့အကျင့်ကို ကျွန်မပြောခဲ့သားပဲ။ သူ့ကို အတတ်နိုင်ဆုံးနားလည်ပေးပါရှင်။ သူက အခုချိန်မှာ မိဘဆွေမျိုးမရှိတော့ လုပ်ချင်ရာကို လုပ်မိတာလည်းပါမယ်…”
”အာ…. ပြီးသွားတာကို ဘာလို့လာပြောနေတာလဲ”
“ဟုတ်ကဲ့။ အရာအားလုံးအတွက် ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်ပြီးရှင့်ဆီက ဦးဝင်းအောင် လိပ်စာများ ရနိုင်မလားလို့ပါ”
ဦးဝင်းအောင်။ အော်… မန်နေဂျာ။ အင်တာဗျူးဖြေလို့ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မန်နေဂျာ။ သူ့လိပ်စာတဲ့လား။ ဒီ အမျိုးသမီးဘာတွေလုပ်ဦးမလို့လဲ။
”တကယ်လို့များ ဆက်သွယ်မိခဲ့ရင်ပေါ့။ တစ်ချက်လောက်ကျွန်မကို ပြောပေးလို့ရ နိုင်မလား။ ရှင်က ကွန်ရက် ပိုကျယ်တော့ တွေ့နိုင်တယ််လေ”
”မေမြသွယ်အတွက်လား ။ ခင်ဗျားအတွက်လား”
စိတ်မဝင်စားဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် မေးဖြစ်မိသွားသည်။
”နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပေါ့။ ကျွန်မ ဦးဝင်းအောင်ကိုပြန်ပြီး တောင်းပန်ပြီးတော့ အလုပ်ပြန်ခန့်မလို့ပါ။ မေမြသွယ်ရဲ့ အလုပ်က အခုပိတ်ထားရတယ်လေ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ အလုပ်မရှိလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ဦးဝင်းအောင်ပြန်လာမှ အဆင်ပြေမှာ အဲဒါ မေမြသွယ်ကို ဖျောင်းဖျခိုင်းပြီး ပြန်ခေါ်မလို့ပါ…”
မေမြသွယ်… အဲဒီ့ အမျိုးသမီးက ဦးဝင်းအောင်ကို ပြန်တောင်းပန်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ် နိုင်ပါ့မလား။ ဒီလောက် အကြောတင်းတာ။ ထားပါလေ။ အဲဒါကျွန်တော့အလုပ်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် …….
မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ ကောင်းမြတ်ရှိနေမှတော့ သူ ဦးဆောင်လုပ်ပေါ့။
”ရှင်မသိသေးဘူးလား ကိုသော်မင်းနောင်။ ကောင်းမြတ် ရုတ်တရက် ကားမှောက် လို့ ဆုံးပြီလေ…”
Previous PostPrevious ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၆)
Next PostNext ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၈)